Fifindramonina, Fialokalofana sy Tanindrazana! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Septambra 2017 3:38 GMT
Afkar, bilaogera monina ao Etazonia, nilaza rehefa tonga tany Etazonia izy, fa voafetra ihany tao amin'ny oniversiteny sy ny trano fonenany ny fahafahany niaina tany Iran. Nilaza ity bilaogera ity fa tsy afaka milaza hoe mifandray tokoa amin'ny fiarahamonina Iraniana. Tao anatin'ny herintaona, nahazo ny PhD izy. Milaza izy fa iray amin'ireo zavatra mampatahotra azy hiverina any Iran ny hoe, fiarahamonina mpivavaka be kokoa sy tsy dia miroborobo tsy tahaka ny tandrefana. Hoy izy
Hamed Ghodsei, bilaogera monina ao Aostrisha kosa mbola te hiverina any Iran rehefa vita ny fianarany mba hitondra fiovana. Hoy izy:
Khanoumhana, bilaogera iray monina ao Japana, indray nilaza fa samy manana ny heviny sy ny fandrisihany hiala an'i Iran avy ny tsirairay . nanoratra izy hoe:
Hoy ihany koa ity tatitra ity, ny olona nanandrana nanangana rafitra na ny orinasan'izy ireo manokana dia nanana fahafahana bebe kokoa hahatsapa fahafaham-po tamin'ny fahombiazan'izy ireo. Nilaza ihany koa ny fanadihadiana fa ireo sakana ara-kolontsaina sy ara-drafitra amin'ny asa no tena olana lehibe indrindra ho an'ny ankamaroan'ny olona raha nanampy betsaka tamin'ny traikefan'ireo olona ireo ny fifamatorana ara-pihetseham-po sy ny mpianatra miavaka.
Miresaka momba ny fahafahana izay tsapany tany andrefana i Depth. Nilaza izy hoe: niala tany Iran aho satria naniry fanajana ara-tsosialy na dia kely indrindra amin'ny maha vehivavy ary naharikoriko ahy ny fiarahamonina nentim-paharazana. Nilaza izy fa tokony hizatra ny fiarahamonina sy ny tontolo iainana na ho lasa mpikatroka ara-tsosialy. Leo politika izy ary tsy te ho lasa Mamera Teresa sy hitomany ho an'ny mahantra! Hoy izy nanampy: